नेपाल आज | छोरीहरुको अस्मितामा कसरी खेलवाड हुन्छ ? ‘अप्रिल फुल’ले बताउँछ (भिडियाेसहित)
छोरीहरुको अस्मितामा कसरी खेलवाड हुन्छ ? ‘अप्रिल फुल’ले बताउँछ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । हिजोआज नेपाली बजारमा प्रेम कथामा आधारित उपन्यास छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । यस्तै उपन्यासहरूलाई पाठकले पनि मन पराइरहेका पनि छन् । विशेषगरि युवापुस्ता माझ प्रेमकथामा आधारित उपन्यास लोकप्रिय मानिन्छन् । प्रेममा आधारित उपन्यास लेख्नेहरुको नाममा अब अर्को एक नाम थपिएको छ । त्यो नाम हो – अप्रिल फुल उपन्यासका लेखक कृष्ण आचार्य ।
आचार्यकोे ‘अप्रिल फुल’ उपन्यासलाई छोटो समयमा नै पाठकहरूले मन पराएका छन् । प्रेममा आधारित उक्त उपन्यासमा प्रेम र समाजको विशेष चित्रण गरिएको उनले बताए । समाजमैै अनुभव हुने, समाजमा लुकेका र सजिलै बाहिर नआएका विषयवस्तु यस उपन्यासमा लेखक आचार्यले उठान गरेका छन् ।
समाजमै हुने घटनाको चित्रण भएको कारण पनि यस उपन्यास हरेक पाठकलाई आफ्नै किताब भएकोजस्तो भान हुने उनले बताए । ‘समाजका किशोर किशोरी कसरी बाँचिरहेका छन्, छोरीको अस्मितामा कसरी खेलबाड भएको छ, भूकम्पको कुरा, वैदेशिक रोजगारीका प्रशंग उपन्यासमा पाइन्छन् । आफूलाई र समाजलाई बुझ्न अप्रिल फुल पढ््नुपर्छ’, उनले भने ।
व्यक्ति अनुसार फरक आयाम हुन्छ । आचार्यको पनि भिन्नै जीवनशैली थियो । किताब लेख्छु भन्नेबारे उनको कुनै लक्ष्य थिएन । नियमित पढाइ र जागिर गरिरहेका थिए । विहानको खाली समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि किताब लेख्न थाले । लेखेपछि अग्रजलाई पनि हेर्न दिए र सबैले एकदम राम्रो छ भनेपछि त्यो पाण्डुलिपी किताबमा परिणत भयो ।
पहिलो उपन्यास हुनाले कथामा रहेका विभिन्न सन्दर्भमा आचार्यले आफ्नो अनुभव राखेका छन् । कति लेखकले आफ्नो उपन्यासमा भएका चित्रणमा आफ्ना भोगाइ छन् भन्नेबारे समर्थन गर्दैनन् । यसबारेमा आचार्य भन्छन्, ‘पहिलो उपन्यास लेख्दा लेखकले आफ्नो सन्दर्भ छैन, म होइन भन्नु पाठकलाई झुक्याउनु हो ।’
पहिलो उपन्यासबाटै आचार्य आफूले सोचेको भन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन् । उपन्यासमा प्रेमसँगै समाज पनि जोडिएको हुनाले अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई बुझ्न पनि यो किताब पढ्न उनले सुझाएका छन् ।
वास्तविक जीवनमा भने उनले अरुलाई ढाँट्ने र झुक्याएर अप्रिल फुल मनाएका छैनन् । यसले ससमाजको चरित्र चित्रण गरेकोे छ । समाजमा लुुकेका र बाहिर नआएका कुुराको उठान गरेको छ ।
उपन्यास पढेका पाठकहरू अर्को भाग चाहियो भन्न थालिसकेका छन् । यस्तो प्रतिक्रियाले उनलाई पुस्तक लेखनमा थप उर्जा दिएको छ ।
कृष्ण आचार्य लेखक अप्रिल फुल
नेपाल भारत र चीनका लागि ‘डेन्जर जोन’ ( भिडियोसहित)